Otu esi etinye Opera Browser Stable, Beta, ma ọ bụ Onye Mmepụta na Linux Mint 20 - WebSetNet
Nhọrọ. Bubata Beta ma ọ bụ Onye nrụpụta
Nhọrọ. Wụnye Beta ihe nchọgharị Opera ma ọ bụ onye nrụpụta
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Opera Browser na Linux Mint 20.
Iji wụnye Opera nke ọma, ị ga-achọ ịwụnye ngwugwu ndị a; gbaa iwu a ma ọ bụrụ na ị maghị; ọ gaghị emerụ gị usoro.
Maka sistemu Mint Linux, ngalaba nchekwa atọ dị ugbu a kwesịrị ibubata n'otu n'otu na sistemụ gị. Ozugbo emechara, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ịgaghị achọ ibudata ndị a ọzọ iji melite Brave n'ọdịniihu.
Nke mbụ, bubata GPG nke achọrọ iji lelee izi ezi nke nbudata ebe nchekwa ahụ. Enweghị nke a, ntinye nke ihe nchọgharị gị ga-ada.
Ka ibubata Opera Browser Ebe nchekwa kwụsiri ike & igodo GPG (A kwadoro):
Ka ibubata Opera Browser Ebe nchekwa beta & igodo GPG:
Ka ibubata Opera Browser Ebe nchekwa onye nrụpụta & igodo GPG:
ụdị "Y", wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na ntinye.
họrọ ịga n'ihu na ihuenyo ọzọ, nke ị ga-enweta nhọrọ ịhọrọ or .
họrọ "Ee", wee pịa "Tinye igodo" imecha echichi.
Ozugbo etinyere ya, gosi na arụnyere ụdị ihe nchọgharị Opera. Nke a ga-achọpụtakwa na nrụnye ahụ gara nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iwunye Brave Beta ma ọ bụ Onye Mmepụta na-ewuli ma ọ bụrụ na ị budatala ebe nchekwa ahụ. A naghị atụ aro ụdị abụọ a kwa ụbọchị, ọkachasị ọ bụghị na desktọpụ isi ma ọ bụ ihe nkesa mmepụta. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ibi na nsọtụ, ị nwere ike ịwụnye nsụgharị ndị ọzọ.
Iji tinye ihe nchọgharị Opera beta:
Iji tinye ihe nchọgharị Opera Mmepụta:
Iji nyochaa beta ihe nchọgharị Opera:
Iji nyochaa onye nrụpụta ihe nchọgharị Opera:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ogwe ọrụ> Ịntanetị> Opera. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ekele, ị tinyela Opera Browser na Linux Mint.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịkwalite ngwugwu ihe nchọgharị Opera ma ọ bụrụ na mmelite dị.
tinye "-beta" or "-mmepụta" na njedebe ma ọ bụrụ na ị wụnye ụdị ihe nchọgharị ndị ọzọ.
Iji wepu Opera Browser, mebie iwu njedebe ndị a:
ụdị "Y", wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na iwepụ.
Iji wepu ebe nchekwa beta:
Iji wepu ebe nchekwa onye nrụpụta:
Ka ịchọta igodo maka Opera Browser site na ndetu dị n'elu, lelee ọnụọgụ na mkpụrụedemede n'usoro ogologo. Na ihuenyo, nke a bụ “9FBD E02F 55F2 54D7 0082 1CCC DD3C 368A 8DE1 B7A0". Iji wepụ igodo GPG na sistemụ gị, rịba ama mkpụrụedemede 8 ikpeazụ nke igodo ahụ, wee mee iwu na-esonụ ka ihichapụ igodo ahụ.
Dịka ị chọpụtala, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ igodo GPG. Jiri otu usoro ihichapụ igodo. Ma nke ahụ bụ ya, ma i wepụrụ Opera Browser kpamkpam na sistemụ Mint Linux gị.
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Opera Nchọgharị Mail igodo